के हो राष्ट्रिय सभा ? किन माघ ९ गते निर्वाचन? सवै नालीवेली
By vijayafm on	 January 5, 2020 कोरोना अपडेट, देश, फोटो फिचर, राजनीति, स्थानीय, स्थानीय तह
डोलराज रानाभाट, २० पुस । प्रतिनिधि सभा त सवैलाई थाहा नै छ । यो वर्षौँदेखिको इतिहासमा प्रतिनिधि सभाको चर्चा धेरै छ । तर राष्ट्रिय सभा को पनि अहिले चर्चा हुन थालेको छ तर तल्लो तहसम्म यसको जानकारी नभएको पाईन्छ । अझ सामान्य जनतालाई त झन जानकारी हुने कुरै भएन । तर पनि यहाँ केही प्रष्ट पार्ने कोसीस गरिएको छ ।
नेपाल सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा विभाजन भएको छ । २०७४ सालमा दुई चरणमा सम्पन्न निर्वाचन मा सवै स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको छ । ५ वर्ष पदावधि हुने भनिएका जनप्रतिनिधिको फेरि माघ ९ गते निर्वाचन किन त ? किनकी माघ ९ गते हुने निर्वाचनका उम्मेदवारहरुलाई जनताको भोट हाल्ने नभई जनप्रतिनिधिहरुले भोट हाल्ने हो ।
दुई वर्ष, चार वर्ष र ६ वर्ष कार्यकाल हुने गरी निर्वाचित हुने सदस्यहरुमा गोलाप्रथाबाट पदावधि तोकिएको थियो । जसलाई दुई वर्षे कार्यकाल पर्यो अहिले उहाँहरुको ठाउँका लागि चुनाव हुन लागेको हो । राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सदस्य रहने गर्दछन् । जुन संख्या एक प्रदेशबाट ८ जना सदस्य निर्वाचित भएर ७ वटा प्रदेशबाट ५६ जना सदस्यले राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाउदछन् । जुन कानुनमै व्यवस्था गरिएको छ । ५९ सदस्य पुग्न आवश्यक ३ जना सदस्य भने नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने कानुनी प्रावधान छ । गत वर्ष पहिलो पटक राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गरेका कारण ५९ सदस्य मध्ये एक तिहाइको पदावधि दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र वाँकीको ६ वर्ष पदावधि हुने गरी गोलाप्रथा गरेर टुंग्याइएको थियो । अहिले त्यहि एक तिहाइ अर्थात १८ जना सदस्यहरु जसको पदावधि दुई वर्षको हुने थियो उहाँहरुको ठाउँमा आगामी माघ ९ गते निर्वाचन हुने हो । उहाँहरुको म्याद भने फागुन २० गते सकिदैछ तर संविधानमै म्याद सकिन ३५ दिन अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेका कारण माघ ९ गते निर्वाचन हुने र सो दिनको निर्वाचनबाट निर्वार्चित सदस्यहरुले भने फागुन २१ गते पदवहाली गर्नुहुनेछ । अव आउने नयाँ सदस्यहरुको पदावधि भने ६ वर्षको हुनेछ ।
अहिले देशमा सवैभन्दा धेरै सदस्य नेकपा पार्टीबाट ३९ जना रहेका छन् । नेपाली काँग्रेसका १३ जना, राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट २ जना, समाजवादीबाट २ जना सदस्यले अहिले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । अन्य ३ जना मनोनितका छन् । माथि प्रतिनिधित्व गरेका मध्ये अहिले नेकपाका ८, काँग्रेसका ७, राजपाका २,समाजवादीका १ जनाको पदावधि सकिन लागेको हो । म्याद सकिन लागेका व्यक्ति स्वयम पनि पुन उम्मेदवार वन्न सक्ने भएपनि दलहरुले यसपटक नयाँ व्यक्तिहरुलाई मौका दिने प्रयास गरिरहेका छन् । जुन कुरा आज उम्मेदवारी मनोनयन गरेपछि थाहा हुनेछ ।
भोट कसले हाल्ने त ?
अहिले चुनावमा जान लाग्नुभएका उम्मेदवारहरुलाई जनताले भोट हाल्ने होइन । अहिलेको चुनावमा ७ वटा प्रदेशमा प्रेदश सभा सदस्यहरु जुन ५५० जना रहेका छन् । त्यस्तै स्थानीय तहका नगरप्रमुख नगर उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र गाउँपालिका उपाध्यक्षले मात्रै मत हाल्न पाउनेछन् । जुन देशभर १ हजार ५ सय ६ जना रहेका छन् । यसरी कुल मतदाता २ हजार ५६ जना छन् र जसले प्रदेश सभा सदस्यबाट मत पाउछन् उनीहरुको मतभार ४८ र स्थानीय तहबाट पाएको मतको भार १८ रहने छ ।